Iindaba - Iindidi eziqhelekileyo zoomatshini
Kuya kubakho ulwazi oluninzi ngoomatshini ongayaziyo malunga noomatshini. Machining ibhekisa kwinkqubo yokutshintsha ledayimenshini iyonke okanye ukusebenza workpiece nezixhobo ngoomatshini. Zininzi iintlobo zoomatshini. Makhe sijonge kwiindidi eziqhelekileyo ezisetyenziswayo
Ukujika (i-lathe ethe nkqo, ukulala): ukujika kukusika ukusika isinyithi kwindawo yokusebenza. Ngelixa umsebenzi ujikeleza, isixhobo siyasika kumsebenzi okanye sijika nomsebenzi;
Wokugaya (yokugaya nkqo kunye wokugaya tyaba): wokugaya kukuqhubekeka ukusika intsimbi nezixhobo ezijikelezayo. Isetyenziselwa ukucubungula i-grooves kunye nendawo emileyo yemilo, kwaye inokuqhubekeka nokwenza imiphezulu ye-arc ngamazembe amabini okanye amathathu;
Ukukruqula: ukukruqula yindlela yokuqhubekeka yokwandisa okanye yokuqhubela phambili inkqubo yokugrumba okanye ukuphosa imingxunya kwindawo yokusebenza. Isetyenziselwa ubukhulu becala imingxunya yokuchwetheza ngobume bokwenza umsebenzi, ubukhulu obukhulu kunye nokuchaneka okuphezulu.
Ukucwangcisa: olona phawu luphambili lokucwangcisa kukuqhubekeka komphezulu womgama wobume. Ngokubanzi, uburhabaxa bomhlaba abuphakame njengobomatshini wokugaya;
Ukubekwa emngciphekweni: slotting eneneni isicwangciso-nkqo. Izixhobo zayo zokusika zihla zinyuka. Ifanelekile kakhulu kwimishini engagqitywanga yeArc. Isetyenziswa ikakhulu ukusika ezinye iintlobo zegiya;
Ukugaya (ukugaya umphezulu, ukugaya izinto ezingaphakathi, ukugaya umngxunya wangaphakathi, isixhobo sokugaya, njl. Umsebenzi ogqityiweyo unobungakanani obuchanekileyo kunye nomphezulu ogudileyo. Isetyenziselwa ukugqitywa kokugqibela kokusebenza okuphathwa bubushushu ukufezekisa ubungakanani obuchanekileyo.
Ukumba Xa kusombiwa, indawo yokusebenza ibekwe kakuhle, icinezelwe kwaye ilungisiwe; Ukongeza ujikelezo, i-drill bit yenza intshukumo yokutya ecaleni kwe-axis yayo.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Izahlulo Ihowuliseyili, Izikrufu, Ukulahlwa kweMagnesium, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Plate Intwasahlobo, Zonke iiMveliso